09.05.2020 Category: カテゴリーなし
ウェイクワフナウクカライブロゴヤクホ？ Noma、usuvele unayo ibhulogi ongaqiniseki ukuthi uyithathe kanjani ifike ezingeni elilandelayo?
Uma impendulo yakho ingu-「yebo」leli khasi liyindawo okufanele ube kuyo.
0.0.1 Kulesi siqondisi sokubhuloga、uzofunda：
0.0.2 Kungani le nkomba yokubhuloga？カンケインガミ
1.1 1. Khetha i-web host engle negama lesizinda
1.1.2 Ukusingathwa kweWebhu-Kukuphi Lapho Ibamba I-Blog Yakho?
1.1.3 Kunconywe Ukusingathwa Kwebhulogi kwama
1.2 2. Khomba i-DNS yesizinda kumgcini wakho wewebhu
1.3 3. Faka i-WordPress kumgcini wakho wewebhu
1.3.1 Ukufakwa Kwencwajana Ye-WordPress
1.3.2 Ukufakwa kwe-WordPressワンクリック
1.4 4. Thola Ikhasi Lakho Lokulawula I-WordPress Nokungena
1.5 2. I-Club Themes Club ekhokhelwe
1.5.2 Izihloko ze-Artisan
1.5.4 I-plugin ye-Gutenbergブロック
2 Isahluko 4. Ukuthola i-Niche nokuqukethwe kokuqukethwe
2.1 Ungayikhetha kanjani i-niche yokubloga efanele?
2.1.1 1. Gcwalisa isidingo
2.1.2 2. oyithandayoに
2.1.3 3. Isihloko esinamandla wokuhlala（オクケケウェオクフララクグウェレ）
3 Isahluko 5. Ukukhula Kokufundwa Kwebhulogi lakho
3.1 1. Bhala okuthile abantu abafuna ukukufunda
3.2 2. Xhuma nomphakathi wakho
3.3 3. Qiniseka ukuthi ibhulogi yakho ifundeka kalula
3.4 4. Ukubhloga ngeBlog
3.5 5. Q & アマプラティフォーム
4 Isahluko 7. Kusetshenziswa Amathuluzi wokubhuloga wamahhala
4.4 イジコンボ & アバクワニンギ
4.5 Imidiya Yezokuxhumana、Ukuthengisa kanye ne-SEO
4.6 I-Web Analytics nokukhiqiza
Kulesi siqondisi sokubhuloga、uzofunda：
Kungani le nkomba yokubhuloga？カンケインガミ
Ngasungula i-Web Hosting Secrets Revealed（WHSR）emuva ngo-2008、futhi ngiyabonga kancane ekwamukelweni okuhle ngumphakathi wokubloga sihambile saya emandleni。 Kusukelaのlapho、I-WHSR ikhuleヤバenye yezindawo ezihola phambili zeNet kwezeluleko zokubamba iwebhu、futhi ngidonsele igama lomkhiqizo amanye amazwi anamandla kakhulu kubhulogi besikhathi samanje – bonke abanikeze imibono野望kule ncwadi nesiza、benza isisetshenziswa sokuya kunoma ngubani oqala indlela yokubamba ibhulogi ezizihambelayo.
Ngalesi siqondisi esibonisa ukungabi nalutho、ngizobe ngikuhlinzeka ngezixazululo ezisheshayo、okulula ukusiqonda futhi ngaphezu kwakho konke ukuxazulula izinkinga zakho zokubloga – okubangelwa ulwazi lwami uqobo nasezingqondweni zabantu abajabulela abakwenzayo.
My ikhasi lephrofayela yomlobi ku-Portlogger.net-Ngishicilele njalo kusayithi elikhulu lomhlahlandlela we-blogger ephezulu phakathi konyaka ka-2015-2018.
Kulula futhi kushibhile ukuqala ibhulogi ngo-2020.
Isoftware yokubloga ethandwa kakhulu、WordPress.org、imahhala。 Izindikimba ezithuthukisiwe ze-WordPress nama-plugins akhululekile。 Futhi kukhona izigidi zama-tutorials wamahhala ukuze uqalise（kufaka phakathi lena）。 Izindleko kuphela ezibandakanyekayo ekuqaleni ibhulogi yimali oyikhokhela umgcini wewebhu negama lesizinda.
インペラ、クンガカラウクホリサエシガベニサカムバ; kodwa uma kukhulunywa njalo、ukubhala ama-blog kuyenzeka kuwo wonke umuntu onekhompyutha ene-inthanethi。 Eqinisweni ungakha ibhulogi futhi uyenze isebenze ngemizuzu engama-20 elandelayo。 Izinyathelo okukhulunywe ngazo kulezi zinyathelo ezilandelayo yile ndlela engiwaqala ngayo amabhulogi ami ekuqaleni.
Ngokuyisisekelo konke okudingeka ukwenze：
Khetha umgcini wewebhu omuhle negama lesizinda
Khomba i-DNS yesizinda sakho kumgcini wakho wewebhu
Faka i-WordPress kusingathi sakho esisha sewebhu（kulula kakhulu ukusebenzisa isifakeli esizenzakalelayo）.
Ngena ngemvume ku-WordPress yakho bese ushicilele okuthunyelwe kwakho kokuqala.
Ngizohamba ngezinyathelo ezingezansi。 Zizwe ukhululekile uma usuvele uyazi ukuthi ungayisetha kanjani ibhulogi yakho.
1. Khetha i-web host engle negama lesizinda
Ukuqala ibhulogi ezizihambelayo、uzodinga kuqala igama lesizinda ne-akhawunti yokubamba iwebhu.
Isizinda sakho igama le-blog yakho。 Akuyonaからengokwenyama ongathinta noma uyibone; kepha umucu wabalingiswa abanikeza iwebhusayithi yakho ubunikazi-njengesihloko sencwadi noma indawo。 Isizinda sakho ‘sitshela "izivakashi zakho ukuthi hlobo luni lwebhulogi abazihambelayo.
Ukusingathwa kwewebhu、ngakolunye uhlangothi、yindawo lapho ugcina khona okuqukethwe kwe-blog yakho-amagama、izingqikithi zebhulogi、izithombe、amavidiyo、nokunye.
Ungakhetha futhi ubhalise amagama akho wesizinda nge-registrarドメイン。 GoDaddy、IgamaCheap、I-Hover、Futhi Domain.com angabanye ababhalisile abadumile emakethe.
Qaphela ukuthi kubalulekile ukuhlukanisa ukubhaliswa kwesizinda komgcini we-web yakho。 Ngoba umnikazi wakho wewebhu enikezela isizinda samahhala akusho ukuthi kufanele uvumele inkampani ebingayo ilawule ukubhaliswa kwakho kwesizinda。 Ngokwami、ngisebenzisa i-NameCheap ukuphatha ukubhaliswa kwesizinda sami; kepha abanye ababhalisi besizinda esidumile kufanele babe abalungile。 Ngokwenza kanjalo、ngiyakwazi ukuguqula i-DNS yami yesizinda noma kunini engikufunayo futhi ngigweme ukuthi ngihluthulelwe nge-web host eyodwa。 Ngikuncoma kakhulu ukuthi wenze okufanayo ukuze uzivikele.
Ukusingathwa kweWebhu-Kukuphi Lapho Ibamba I-Blog Yakho?
Ngokuqondene nokusingathwa kwewebhu、hlola okwami ukukhetha okungcono kakhulu kokubamba iwebhu futhi inkomba yokubukeza yokubamba.
Okokuqala、ngincoma ukuqala okuncane ngomsingathi wewebhu owabiwe.
Ukusingathwa okwabiwe-Noma izinsiza zokubamba zincane uma ziqhathaniswa nezinye（i-VPS、ifu、njll）、uzodinga isabelomali esincane（imvamisa <登録時に5ドル/月）nolwazi lwezobuchwepheshe ukuqala。 Lapho ukhetha i-web host ye-blog yakho、yilezi zinto ezinhlanu zokucatshangelwa：
ウクテンベカ – I-blogヤコーイディンガウクキナフティイトラカレオンライン24×7.
速度 – Udinga umgcini olayisha ngokushesha ngoba ijubane lithinta umuzwa womsebenzisi kanye nesikhundla sokucinga.
ザマナニ – ウクシンサワゲ- <$ 5 / mo kuyisiqalo esihle、awudingi insiza yeprimiyamu kulesi sigaba.
イグンビ・ロクフラ – Uzodinga ukubuyekezwa kokusingathwa（izici ezingeziwe、amandla esengezi amaningi、njll）njengoba ibhulogi yakho ikhula.
アマプロセサアセケルウェ – I-Intanethi ihlala ishintsha、kuhle ngaso sonke isikhathi ukuba nomuntu ozokusekela ohlangothini lobuchwepheshe.
Kunconywe Ukusingathwa Kwebhulogi kwama
Bamba amabhulogi amabili ku-InMotion Ukusingathwa nge- $ 3.99 /月.
I-Hostinger ingenye yamasosi ashibhile ashibhile kuwebhu、ikakhulukazi ngesikhathi sokubhalisa i-honeymoon Naphezu kokuba yinkampani ebamba isabelomali、i-Hostinger inikezela ngamathani wezimpawu zokubambaze-premium ezilungung.
I-SiteGound ishaja u- $ 3.95 / mo ngokuqamba ibhulogi eyodwa
イティプー・ル・プロ：Ngoba ukuthi umsingathi wewebhu athandwa、akusho ukuthi kungcono kakhulu kubhulogi lakho。 Bheka ukusebenza kokusingathwa futhi ubuyekeze ngokucophelela ngaphambi kokwenza isinqumo.
2. Khomba i-DNS yesizinda kumgcini wakho wewebhu
Okulandelayo、uzodinga ukubuyekeza irekhodi le-DNS kubhalisi wegama lesizinda（lapho ubhalise khona isizinda sakho kusinyathelo＃1）ukkhomba amaseva we-web host yakho（I-InMotion Ukusingathwa、i-Hostinger noma.
I-DNS imele i-Domain Name System futhi isetshenziselwa ukuqondisa noma yimuphi umsebenzisi ongena ekhelini le-IP leseva。 Ngakho-ke、lapho umsebenzisi engena ku- "WebHostingSecretRevealed.net" amarekhodi e-DNS azolanda ikheli le-IP lomgcini we-web wami futhi anikeze indawo yami umsebenzisi.
Isibonelo：Ukubonisa iwebhusayithi kwi-InMotionホスティングネームサーバーkwaGoDaddy.
Nayi imiyalo yesinyathelo ngesinyathelo yokuvuselela i-DNS ye-blog yakho GoDaddyまたはNamecheap.
3. Faka i-WordPress kumgcini wakho wewebhu
Ukuqala ukubloga usebenzisa i-WordPress kuzodingeka ufake kuqala uhlelo kumsingathi wakho wewebhu。 Lokhu kungenziwa ngesandla、noma ngokuzenzakalelayo kusetshenziswa uhlelo lokufaka lokuchofoza okukodwa。 Lezi zindlela zombili zilula kahle futhi zingenziwa kalula.
Ukufakwa Kwencwajana Ye-WordPress
Ukubheka ngokushesha、Nazi izinyathelo okudingeka uzenze：
Landa futhi unzip iphakethe le-WordPress ku-PC yakho yangakini.
Yakha imininingwane ye-WordPress kuseva yakho yewebhu、kanye nomsebenzisi we-MySQL onamalungelo onke okufinyelela nokuwushintsha.
Qamba kabusha ifayela le-wp-config-sample.php ukuze wp-config.php.
Vula i-wp-config.php kusihleli sombhalo（inothi）bese ugcwalisa imininingwane yakho yedatha.
Beka amafayela we-WordPress endaweni oyifunayo kuseva yakho yewebhu.
Qalisa iskripthi sokufakwa kwe-WordPress ngokufinyelela i-wp-admin / install.php kusiphequluli sakho sewebhu。 Uma ufaka i-WordPress kumhlahlandlela wezimpande、kufanele uvakashele：http://example.com/wp-admin/install.php; uma ufaka i-WordPress ku-subdirectory yayo ebizwa ngokuthi ibhulogi、isibonelo、kufanele uvakashele：http://example.com/blog/wp-admin/install.php
Iningi lama-blogger kulezi zinsuku alizifaki i-WordPress yalo ngesandla.
Ngokuxhaswa kwezinsizakalo zokufaka ngokuchofoza okukodwa I-Softaculous futhi Indawo ye-Mojo Market（kuya ngokuthi usebenzisa muphi wewebhusayithi）、inqubo yokufaka iqonde ngqo phambili futhi ingenziwa ngokuchoalza nokukokufoza.
Ngokwesithenjwa sakho、izithombe ezilandelayo zibonisa lapho ungasithola khona isici sokufaka ngokuzenzakalela kuwe ideshibhodi ye-Hostinger。 Ukufaka i-WordPress、vele uchofoze kusithonjana esiyindilinga bese ulandela imiyalo yobufakazi dummy-uhlelo lwakho lwe-WordPress kufanele lube lusebenza futhiルンガフェリimizuzu engu-5.
Isibonelo：Ungafaka i-WordPress kusingathi sakho sewebhu ngokuchofoza nje ezimbalwa usebenzisa i-Hostinger Auto Installer（vakashela i-Hostinger lapha）.
Izinto zingahle zibukeke zihlukele kubasubathi bewebhu abahlukile kepha inqubo empeleni iyafana。 Ngakho-ke ungakhathazeki uma ungasebenzisi eyodwa yalezi zingosi engizibonisa lapha.
Ngokwami ngicabanga ukuthi i-WordPress iyipulatifomu engcono kakhulu yokubloga kwama-newbies。 Kususelwa kwizibalo ezivela kuKwakhiwe Nge、angaphezu kwama-95％amabhloghi e-United States akhiwa kusetshenziswa i-WordPress。 Emhlabeni jikelele、kukhona cishe Amabhulogi ayizigidi ezingama-27 asebenza ku-WordPress.
4. Thola Ikhasi Lakho Lokulawula I-WordPress Nokungena
Lapho usufake uhlelo lwakho lwe-WordPress、uzonikezwa i-URL yokungena ngemvume ekhasini lakho lomqondisi le-WordPress。 Ezimweni eziningi、i-URL izoba yinto efana nale（kuncike kufolda oyifakile i-WordPress）：
Iya kule URL futhi ungene ngemvume ngegama lakho lomsebenzisi esethiwe nephasiwedi; futhi usuka lapho、manje uzoba sekupheleni-kwesokunxele（ideshibhodi）yesayithi lakho le-WordPress-lokhu kuyingxenye yebhulogi lapho wena kuphela njengomlawuli ongangena khona.
Ukwakha i-blokupost entsha ku-WordPress Gutenberg entsha.
Uhlobo lwamuva lweWordPress ngalesi sikhathi sokubhala yinguqulo 5.3.2-ngokuzenzakalelayo ozobe usebenzisa I-WordPress Gutenberg njengomhleli wombhalo。 UGutenberg uletha ukuguquguquka okuningi epulatifomu le-WordPress。 Lokhu kusebenza kakhulu kubaqalayo ngoba izinto eziningi njengokusetha imibala yangemuva nokuningi akusadingi ukufaka amakhodi。 Uhlelo lwe-block luyasiza nokuphathwa kokuhlelwa kwesakhiwo.
Ukuze ubhale uphinde ushicilele okuthunyelwe okusha、indlela elula eya kwesokunxele、chofoza okuthi ‘Okuthunyelwe’> ‘Engeza Okusha’ futhi uzoqondiswa esikrinini sokubhala。 Chofoza okuthi ‘Hlola kuqala’ ukuze ubone ukuthi izinto zibukeka kanjani ekugcineni（okuzofundwa ngabafundi bakho）、chofoza ‘Shicilela’ uma okuthunyelwe kuqediwe.
サウボナ！ Manje usushicilelwe iposi lakho lokuqala le-blog.
Yilapho ungathola khona zonke izingqikithi ze-WordPress zamahhala。 Izindikimba ezibhalwe kuloluhla lwemibhalo zilandela izindinganiso eziqine kakhulu ezinikezwe abathuthukisi be-WordPress、ngakho-ke、ngombono wami、le indawo enhle yokuthola izindikimba zamahhala.
2. I-Club Themes Club ekhokhelwe
Enye indlela yokuthola izingqikithi eziphezulu ezikhokhelwayo ziwukuba ubhalisele kuma-Clubs e-WordPress Theme.
Uma kungokokuqala ukuthi uzwe ngama-theme Club、nakhu ukuthi kusebenza kanjani：ukhokha inani elilungile lemali ukuze ujoyine iklabhu futhi uthola imiklamo ehlukahlukene enikelwe emakilabhini。 Izindikimba ezihlinzekwa kwi-theme Club zivame ukwenziwa ngobungcweti futhi zivuselelwe njalo.
エレガントなインディキンバ円ダバ、I-Studio Press、Futhi Izihloko ze-Artisan kukhona amaClub ama-WordPress Themes amathathu engiyincomayo.
Bangu abanye abaningi kakhulu lapho-amanye amakilabhu abuye athole imboni ethile、njengabangempela noma izikole; kodwa sizohlanganisa kuphela oku-3 kulesi sihloko.
Izibonelo ze-Elegant Themes-Ngaphezu kwezingqikithi ze-WordPress ze-80、chofoza lapha ukuze ubone ama-demos wangempela wetimu.
Vakashela：StudioPress.com。インテンゴ：$ 129.95 / indaba noma i- $ 499.95 / isikhathi sokuphila
Uma ungumsebenzisi we-WordPress wesikhathi eside、kungenzeka ukuthi uzwe nge-StudioPress。 Kuyathandwa kakhulu Uhlaka lweGenesise、isakhiwo se-WordPress se-minimalist ne-SEO-friendly yazo zonke izingqikithi ze-StudioPress.
I-StudioPress inikeza izintengo eziguquguqukayo ezisekelwe ezidingweni zakho。 Umhla kaGenesise onesihloko somntwana uyatholakala ngenkokhelo yesikhathi esisodwa se- $ 59.99。 Isihloko se-premium、esibandakanya i-Framework yeGenesis、ibiza u- $ 99 ngamunye。ウマウフナウクフィニエレラクゾゾンケアイジングキキティ、ウンガホカi- $ 499.
Ukulungele kwenziwe amasayithi anikezwe yi-Artisan Themes.
Funda kabanzi： Nazi ezinye izinto ezilula ongazenza ukuvikela ibhulogi yakho ye-WordPress
Uma kukhulunywa ngokusebenza kahle kwebhulogi、I-W3 Inani le-Cache futhi Umsebenzi we-Swift izinketho ezithandwa kakhulu.
Amanye ama-plugins amabili wokusebenza okufanele nawo uwabheke kuwo I-Cloud Flare、Futhi WP Super Yemibhalo Yehhovisi。 I-Cloud Flare iyi-plugin yamahhala enikezwe yinkampani ye-CDN、iCloud Flare; ngenkathi i-WP Super Cache yathuthukiswa nguDonncha no-Automattic、inkampani ethuthukise futhi esebenza i-WordPress manje.
I-plugin yesilondolozi kumele ibe nayo ezweni lesimanje lokubhuloga-ithuthukisa ulwazi lomsebenzisi kakhulu ngokwandisa ukusebenza kweseva、inciphisa isikhathi esithathwe ukulanda futhi yenyusa ijubane lasilayishish.
Uma ibhulogi yakho inezithombe eziningi kuyo-cabanga ukungeza I-EWWW Image Optimizer。 Kusetshenziswa isithombe esisodwa ngokuchofoza okwazi ukwengeza amafayela wezithombe emtapweni wakho wezincwadi。 Ine-othomathikhi yesici sokucindezelwa kwesithombe okuzenzakalelayo ukunciphisa usayizi wezithombe ngenkathi uzilayisha。 Ngokukhulisa izithombe、unganciphisa izikhathi zokulayisha zekhasi bese uholela ekusebenzeni kwesayithi ngokushesha.
Funda kabanzi： SEO 101 okokuqalaブロガー
Ngokwazisa komhleli weGutenberg ku-WordPress 5.0、ama-blogger manje angenza okuqukethwe kusetshenziswa umhleli osuselwa ebhlokini。 Ngokuzenzakalelayo、i-WordPress inikeza iqoqo lezisekelo eziyisisekelo zokuqukethwe ezinjengendima、isithombe、inkinobho yokubiza-isenzo、ikhodi yokufushane、njalonjalo。 Ngokwengeza kuma-plugins we-Gutenberg Block、uthola ukwengeza izinto ezibandakanya kakhulu（izibonelo-i-FAQ、i-accordion、iphrofayili yombhali、i-carousel、ama-Click-to-tweets、amabhlogo we-gifhuloghkub）.
Ayibambeki、Amabhlokhi Okugcina、Futhi I-CoBlocks kukhona ama-plugins amathathu alula futhi wamahhala we-Gutenberg Block ukuzama.
Isahluko 4. Ukuthola i-Niche nokuqukethwe kokuqukethwe
Lokhu kujwayelekile ukuthi i-newbie iqale kanjani ibhulogi：bebengabhala ngomsebenzi wabo ngoMsombuluko、ukuzilibazisa ngoLwesibili、amafilimu abawabukele ngoLwesithathu、kanye nemibonophaezezezizikika yezepolit Ngamafuphi、laba bantu bamane babhale ezihlokweni eziningi ezahlukahlukene ngaphandle kokubekwa phanbili.
Yebo、lawa ma-blogs azothola okulandelayo phakathi kwabahlobo nemindeni yabo;コドワイロコ.
Kunzima kakhulu ukuba nenombolo enkulu yabafundi abathembekile lapho ubhuloga ngokungahleliwe ngoba abantu ngeke bazi uma ungumgxeki wama-movie、obukeza ukudla、noma umgxeki wezincwadi。 Abakhangisi bazophinda banqikaze ukukhangisa nawe ngoba abazi ukuthi yini wena。 Ukwakha ibhulogi ephumelelayo、udinga ukuthola i-niche.
Ungayikhetha kanjani i-niche yokubloga efanele?
Ukuthola i-niche ye-blogging efanele、nayi amaphuzu abalulekile okufanele uwacabangele.
1. Gcwalisa isidingo
ウマウケウカバンゲウクティ "Ngifisa sengathi omunye ubhulogi ngalokhu", lowo mzuzu we-ha。 Uma kungesihloko ongathanda ukwazi kabanzi ngakho、cishe kungenzeka isihloko esiya kwabanye abantu abafuna ukwazi ngakho.
Uyini ulwazi lwakho oluyingqayizivele？ Unganikeza kanjani to ehlukile esihlokweni esingabikho muntu omunye？ Kungenzeka ngisho nangenxa yokuxoxisana nodokotela.
Isibonelo：I-blog kaGina、Ukwamukela Ukungapheleli、igxile ekusizeni omama abakhulisa izingane abanezidingo ezikhethekile.
Khumbula ukuthi uzobe ubhala、ufunda futhi ukhuluma ngendaba yakho njalo ngosuku olulodwa eminyakeni embalwa elandelayo。 Uma unesithakazelo esihlokweni sakho sebhulogi、ngabe kungaba nzima ukunamathela njalo.
Futhi、uzokujabulela ukubhala kulezo zihloko.
3. Isihloko esinamandla wokuhlala（オクケケウェオクフララクグウェレ）
Ngenkathi ukuphikisana kuhle、akuqinisekisi ukuthi isihloko sakho sizoba ngesonto elizayo。イシボネロ、ウマウネシタカゼロカクルヌゲバインフティウカライフログエリクシルクウォ、ウマロコークフェレルワイムファシニウソキファオクケケスウェ。クンコノウムコンドウクシラクウェシフロコエシバミール（ンジェンゴクティ） "ukunciphisa izitayela zezokuxhumana zenhlalo" 野間 "izinhlelo zokusebenza zesithombe ezithwala". Ngaleyo ndlela、uma i-fad ihlukana nemfashini、ibhulogi yakho isengakwazi ukuqhubeka ibukele noma yikuphi okuyifake esikhundleni sayo.
I-blogヤコ・イディンガ・ウクンゲナi-niche ongayenza imali.
Zibuze ukuthi ingabe sisihloko esizodonsa amehlo abafundi futhi sakhe imali-kungaba ngokukhangisa noma ngokuthengisa。 Uma ubhuloga ukusekela ibhizinisi lakho elikhona、ingabe ibhulogi iletha amakhasimende amasha？ Uma ubhuloga nje ngoba usithanda kakhulu isifundo、ingabe ikhona indlela yokwenza imali ngebhulogi lakho?
Ngisebenzisa I-SpyFu、ithuluzi lokukhangisa ngokuchofoza ngakunye、ukulinganisa inzuzo ye-niche ngesinye isikhathi。 Umqondo wami ngemuva kwalokhu-uma abakhangisi bekhokha izinkulungwane zamaRandi ku-Google Adwords、kumele kube nemali okumele yenziwe kulo mkhakha。ナチ・イジボネロ・エジンビリ・エンジシトリル：
イシボネロ＃1：Lena izibalo zokukhangisa zomkhiqizi wembatho yemidlalo（cabanga ngemidlalo yezemidlalo njenge-Adidas noma i-New Balance kodwa encane）。 Le nkampani yayichitha ngaphezulu kwe $ 100,000 ngenyanga ku-Adwords ngokusho ku-Spyfu.
Isibonelo＃2：Lena izibalo zesikhangiso se-ITソリューションプロバイダー。 Kube ne-20 abanye abadlali abakhulu kule niche。 Le nkampani、ikakhulukazi、ithenge izikhangiso kuma-keywords we-3,846 ku-Google futhi yachitha cishe u- $ 60,000 ngenyanga.
Funda kabanzi： Ungakubhala kanjani okungenani okuqukethwe okukodwa okuhle ngesonto ngokungaguquki
Isahluko 5. Ukukhula Kokufundwa Kwebhulogi lakho
Iqiniso elidabukisayo lama-blogger amaningi laphaya kubathathe isikhathi esiningi ukwakha abafundi babo。 Ukuthola ukubukwa kwamakhasi abo okuqala ayi-1,000 XNUMX kungathatha izinyanga、futhi amanye amabhulogi abuchwepheshe kakhulu kubonakala sengathi afika lapho.
Nawa amasu amahlanu ayisisekelo azokusiza ukuthi uthathe ibhulogi yakho kusukela ngoSuku 1 kuya ekubukweni kwekhasi ayi-1,000 XNUMX.
1. Bhala okuthile abantu abafuna ukukufunda
Abantu baminza ekuvuseleleni imidiya yokuxhumana nomphakathi、ukuphakelwa kwezindaba、ama-imeyili、kanye nezinhlobo ezahlukile zama-promos。 Kuya ngokuya kuba nzima ukwenza abantu bafunde okuqukethwe kwakho。 Kodwa-ke、usengenza kahle uma wazi ukuthi izethameli zakho ezinhle zingobani nokuthi zifunani。 Cabanga ngegebe eliku-niche yakho、uluphi uhlobo lokuqukethwe olungekho nokuthi ungaletha kanjani ukubaluleka okwengeziwe ezilalelini zakho.
Nazi izinto ezingakusiza ocwaningweni lwakho：
Sebenzisa amathuluzi wokuxhumana nomphakathi ukulandelela okuqukethwe okuyimpumelelo kwimidiya yezenhlalo。 Ngokude、ungakhiqiza imibono yokuqukethwe ethola impendulo enhle kusuka kwabezindaba zenhlalo.
Sebenzisa amathuluzi wokuqukethwe njenge Phendula umphakathi ukucinga imibuzo ethandwa ngabantu ebuza kuGoogle.
Sebenzisa ithuluzi lokucwaninga elingukhiye ukuthola izihloko ezithile abantu abazifunayo ngaphakathi kwe-niche yakho。 Ungaveza okuqukethwe kususelwa kulawo magama angukhiye.
2. Xhuma nomphakathi wakho
"クワビウェフティクウェンジワ" akuseyona igama lomdlalo.
Kufan​​ele njalo wabelane ngokuthunyelwe kwakho、カニンギニンギ。 Uma umenyelwa ukujoyina ibhodi leqembu le-Pinterest elifana ne-niche yakho、bhalisa futhi wabelane futhi uphawule njalo。 Uma ujoyina uhlu lwama-blogger anombono ofanayo、izingqinamba ingabe azokwabelana ngokuqukethwe komunye nomunye njalo ngeviki noma nsuku zonke。 Lokhu kuzosiza ukukhulisa ukufunda kwakho nokuzibandakanya.
Funa ngaso sonke isikhathi isizwe sakho-vuselela amanye amalungu kuwo futhi uxhumane nawo.
Siza emaphathini e-Twitter。 Beka amazwana kokuthunyelwe kwamanye amalungu。 Yabelana ngezindatshana ezindabeni zakho zezindaba。 Zungeleza futhi uzuze ama-blog owathandayo ngokufaka eyodwa njalo ngeviki noma ngenyanga.
Buza ukuthi ungamsiza kanjani umuntu ngaphandle kokuthunyelwe kwesithameli noma ngokunikeza amabala okuthunyelwa kwabavakashi。 Thengisa imikhiqizo yabo、sebenzisa izixhumanisi zabo ezihambelanayo、khuthaza izixhumanisi zabo kuma-social media yakho ngenkathi ubathengisa。 Njengamathuba okubamba ababhulogi beza、laba bhulogi bazokhumbula usizo lwakho futhi bakumeme ukuthi ubambe iqhaza.
3. Qiniseka ukuthi ibhulogi yakho ifundeka kalula
Ngiyakhungatheka lapho ngithola ibhulogi enesihloko engijabule ngayo ngokuphelele ukuthola okuqukethwe okunesisekelo esikhulu sombhalo、izigaba ezimbalwa、akunamakhanda noma ngezinhlamvu namafonti amancane。ロホクヤンギショシャ.
Ngaphezu kwalokho engihlangabezane nakho ngenhla、ibhulogi lakho akufanele lifake abafundi izixhwanguxhwangu nokungena ngokuchofoza。 Esikhundleni salokho、ukwethula okuqukethwe ngekhono kubafundi bakho。 Yazi izingqinamba zesikhathi sabafundi bakho futhi uqonde ukuthi yini edonsa kanzima ukuze bahlale kusayithi lakho.
Nakhu ongakwenza ukwenza ibhulogi yakho ukuthi ifundeke kalula：
Lungiselela ibhulogi yakho ngokusebenzisa izihloko、izihloko ezingezansi、amaphoyinti、noma uhlu olunezinombolo。 Lokhu kusiza okuqukethwe kwakho ukubonakala kuhlelekile ngokwengeziwe.
Hlukanisa okuqukethwe yibhulogi yakho ube yizigaba noma izigaba。ウドンガロンバロルンガブケカジェンゴクウェトゥサフティルファンディーゼアバファンディングコウェクイル.
Gwema ukusebenzisa amafonti amahle。 Namathela ngamafonti ephephile kuwebhu afana ne-Agency、ジョージア州、タイムズ、njll.
Sebenzisa isiNgisi esilula bese ubhala ngemisho emifushane。 Inhloso yokufundwa kwendatshana yakho komfundi webanga lesishiyagalombili.
4. Ukubhloga ngeBlog
Okokuqala、ukubeka amazwana kumabhulogi mhlawumbe kuyindlela enganakwa kakhulu yokwakha i-blog traffic-ikakhulukazi ngoba abantu bancela ukwenza izingxoxo ezisezingeni、nezinengqondo nabantu abangabazi（nami uq） Kodwa-ke、ukuphawula nge-blog kuyindlela esezingeni eliphezulu yokwakha ithrafikhi nayo eyenzeka ibe mahhala-ngeke iphikisane nalokho!
Kunemithetho emibili egolide okufanele ubeke ngayo amazwana ebhulogi：
Bhala njalo ukuphawula kwekhwalithi。 Uma ungenayo into enengqondo ongayengeza engxoxweni、ungashiyi umbono（"Ngiyabonga-umbono omkhulu" amazwana …泡瀬ベンジ）
Yilahla kuphela isixhumanisi lapho kufanele khona。 Musa ukugaxekile、noma ungazama kangakanani;イゾブエラクウェ.
Ngenkathi omunye umthetho（hhayi umthetho wegolide、mhlawumbe）、uma ushiya isixhumanisi、unganikezi nje i-URL yebhulogi yakho。 Esikhundleni salokho、xhuma kokuthunyelwe okufanele kwakho okungeza inani kokuthunyelwe kanye nengxoxo yokuqala。 Ukuvama kuyisihluthuleloラファ.
5. Q & アマプラティフォーム
アマフォラムナマプラティフォームwe-Q&ayizindawo ezinhle zokuthola isihlalo phambi kwezithameli zakho ezithintekayo。 Icebo lokuqapha izingxoxo eziqhubekayo kwi-niche yakho ukuze ukwazi ukungena lapho unokuthile okusizayo（futhi cha、akuwona wonke amaposi azoba yithuba-kodwa abanye bazokwenza） Uzodinga umfundi omuhle wokuphakelayo、onjenge-Okuphakelayo、ukuze enze lo msebenzi.
Ukungatholi isilinganiso esiqondile noma ngokwanele samathuba wamachashazi?
Dala okuqukethwe okuthile okuhambisana nengxoxo eshisayo。 Isibonelo、uma umuntu ebuza ukuthi angenza kanjani okuthile nge-.htaccess code、ungabhala isifundo futhi usithumele kubhulogi lakho-lapho、engxenyeni ye-Q & a yesayithi、phendula kumenzi wesicelo nge-teas、uyixhumanisa ne-blog yakho ukuthola amakhodi aphelele namademo。 Okubi ukuthi uma umuntu oyedwa ebuze lo mbuzo、abanye banalo mbuzo ofanayo-futhi isithangami sakho siyaphendula futhi nesixhumanisi sizophila ngaso sonke isikhathi ukuze sibeluleke lapho isikhathi sesifikile.
Ngokuya ngokuthi iyiphi amapulatifomu we-Q&okufanele ngisebenzise、ngincoma
I-Quora、iKlout、ne-Yahoo！ Izimpendulo-Lezi zingxenye ezintathu ezinhle kakhulu ze-Q & あ
IStackOverflow-uma ungumshicileli uthengisa amabhuku wokuhlela.
Funda kabanzi： Thola izindlela eziningi zokwenza imali ngebhulogi yakho futhi ufunde uKevin Muldoon’s Case cwaningo ngokuthengisa iBloggingTips.com ngama- $ 60,000.
Isahluko 7. Kusetshenziswa Amathuluzi wokubhuloga wamahhala
Noma amathuluzi wamahhala awusizo nezinsizakalo zewebhu zikhona ku-inthanethi、inkathazo iwuthola kuwo wonke amanye ama-junks noma / namathuluzi aphelelwe yisikhathi.
Njengesipho sokuhlukanisa ukufunda umqondisi wami kuze kube lapha、ngizokunikeza uhlu lwamathuluzi wamahhala esiwasebenzisa ngaso sonke isikhathi ku-WHSR。 Inhlanhla、futhi ngifisa sengathi uphumelele kohambo lwakho lokubhuloga.
Ngemva Umnqamulajuqu-Isitayela sangaphambili kanye nokuhlolwa kohlelo lolimi.
文法-Umsizi wokubhala owaziwa kakhulu wewebhu.
Uhlelo lokusebenza lwe-Hemingway-Bhala ngamafuphi nangesibindi ngaleli thuluzi.
Inkululeko.to-Vimba amawebhusayithi aphazamisayo ukuze ukwazi ukugxila ekubhaleni.
ByWord-Ithuluzi lokubhala lamahhala.
Evernote-Ithuluzi elilodwa elidinga isingeniso.
Isithombe-Hlela bese uklama ithuluzi elihle lezithombe zokuthunyelwe kwezokuxhumana、amaphosta、isimemo、njll.
Canva-Dizayina izithombe ezinhle nezikhala zemidiya yezenhlalo.
Idizayini yokuKwakha-Dala izithombe ezinhle usebenzisa izifanekiso zamahhala nezithombe ezenziwe ngomumo.
I-JPEG Mini-Yehlisa usayizi wamafayela we-.jpeg.
I-Tiny PNG-Yehlisa usayizi wamafayela we-.png.
Pic Monkey-Ithuluzi lokuwina lomklomelo wesithombe.
Pik kuya etsheni-Ithuluzi lokudala elilula le-infographic.
Pixlr-Ithuluzi lokuhlela isithombe.
Favicon.io-Ijenereta ye-favicon ehamba phambili.
アイコンファインダー-Isiqondisi sesithonjana samahhala esikhulu.
Ifayela likaMorgule-Izithombe ezingaphezu kuka-350,000 zokusetshenziswa kwezentengiso.
I-Snap Yesitoko-Isayithi lemibhalo yesithombe enezithombe ezinhle zamahhala ezingezwe masonto onke.
Izithombe ze-WHSR zamahhala-Izithonjana zamahhala ezenzelwe umklami wethu ongaphakathi endlini.
イジコンボ & アバクワニンギ
World Scientific-Incwadi yezindaba yamahhala yabafundi.
I-World Fact Book-Akukho kudlala-ulwazi lomhlaba ngokuqondile kwi-CIA.
I-Tech Republic-Amaphepha amhlophe、imibiko、kanye nezifundo zamacala ku-tech.
マーケティングシェルパ-Imibiko yamahhala yokuthengisa.
I-Pub Pub-Omagazini bamahhala、amaphepha amhlophe、kanye nezifundo zamacala.
I-ハブスポットライブラリ-Umthombo omuhle wesethenjwa kumakethi.
CrunchBase-Izindaba ngezinkampani zokuqalisa.
I-BuzzFeedのトレンド-Thola izihloko ezishisayo zakamuva ku-BuzzFeed.
Ukunyuswa kokubhala ngokubhaliwe-Imibono kanye nokushukumisela uknqoba amabhlogo okubhala.
Izaziso ze-Google-Thola ama-imeyili wokuqwashisa kokuqukethwe okusha okulandela.
Imidiya Yezokuxhumana、Ukuthengisa kanye ne-SEO
Ithuluzi lewebhu le-Bing-Ithuluzi lokuhlola indawo le-Bing lamahhala.
Ithuluzi le-Googleウェブマスターツール-Ithuluzi lokuxilonga lesiza samahhala le-Google.
Landela-Stalk izimbangi zakho
I-SEO enkulu-Uhlobo lwamahhala likuvumela ukuthi uhlole iphrofayili yokuxhumanisa isayithi（CF / TF）ngokushesha.
Bamba i-Bay-オールインワンウクマケサ、ヨクテンギサ & サービスezenzakalelayo yesikhulumi
Umhloli wekhasi ofanayo-Bheka amakhasi ayimpinda kubhulogi lakho.
Njengo-Explorer-Bheka amamethrikhi ezenhlalo wokuqukethwe kwakho（noma ancintisana nabo）.
Tweet Deck-I-akhawunti eminingi ye-Mange ye-Twitter kudeshibhodi eyodwa.
バズ相撲-Thola okuqukethwe okudumile kanye nethonya kumanethiwekhi amakhulu ezokuxhum.
Ibhodi lethegi-Ucwaningo lwemakethe yezokuxhumana.
IFTTT-Shicilela okuqukethwe kumapulatifomu amaningi ezokuxhumana nabantu kalula.
I-Web Analytics nokukhiqiza
-Google Analytics-Izibalo zamahhala zewebhu.
Matomo-I-Google Analytics isusa iGoogle.
I-YouTubeアナリティクス-Izibalo kumavidiyo akho e-YouTube.
Izibalo ze-WP-Qhathanisa ibhulogi yakho ye-WordPress nabanye.
Inqubo yezindlela-Inqubo elula nokulawulwa kokuhamba komsebenzi.
Bitcatcha-Hlola isivinini sesayithi kusuka ezindaweni eziyi-10.
Ukuhlolwa kwekhasi lewebhu-Bheka isivinini sekhasi lewebhu.
I-GT Metrix-Hlola futhi ulandelele isivinini sokulayishwa kwekhasi lewebhu ngemininingwane.
Izindleko eziqikwayo zokuqalisa ibhulogi efaka igama lesizinda nokusingathwa kwewebhu kungaphansi kwe- $ 100 ngonyaka（ngaphansi kuka- $ 10 ngenyanga）。 Le ndleko isuselwe kubhulogi ezizihambelayo（isebenzisa i-WordPress）。 Ukudilizwa kwezindleko kuzoba：$ 15 ngonyaka ngegama lesizinda se-.com futhi cishe kube ngama- $ 60 ngonyaka ngemali ekhokhwayo yokubamba iwebhu.
2. Abablogi bakhokhelwa kanjani?
Ukuze uthole isithombe esingcono sokuthi ama-blogger akhokhwa kanjani、ngiwahlukanisa ngezinhlobo ezi-2-enye lapho usebenza ngqo namakhasimende noma abakhangisi kanti enye lapho ujoyina uhlelo olunikezine yinkampani.
Uma usebenzelana ngqo namakhasimende noma abakhangisi、unokulawula okwengeziwe ngentengo。 Ungathola imali ngo：
– Ukuthengisa okuqukethwe kwe-premium（isayithi lobulungu）
– Ukubhala nokunyathelisa okuthunyelwe okuxhaswe
3. Ungaqala kanjani ibhulogi mahhala?
Kunamapulatifomu amaningi lapho ungaqala khona ibhulogi yamahhala namuhla、lokhu kufaka i-WordPress.com、iTumblr noma i-Blogger。 Ukwenza i-blog yamahhala、konke okufanele ukwenze ukubhalisa futhi ungaqala ukushicilela okuqukethwe kwakho.
4. Yini ukubamba ngemuva kwepulatifomu yokubloga yamahhala?
Akukho okuza mahhala emhlabeni wethu。 Kunezinto eziningi zokungathandeki ngeplatifomu yokubhuloga yamahhala：
– Kukhona imithetho ebekwe yipulatifomu ngayinye okudingeka uyigcine
– Igama lesizinda sebhulogi yakho libukeka njengesizinda esingaphansi kwe-「myblogname.wordpress.com」noma i-「myblogname.tumblr.com」
– Kukhona ukusebenza okulinganiselwe、ama-plugins nokukhethwa kwengqikithi ongayenza kubhulogi yakho
– Ngokuvamile、amapulatifomu amahhala anciphisa ithuba lokwenza imali ngebhulogi lakho
Ngiphakamisa kakhulu ukuthi uqale ibhulogi yakho usebenzisa i-WordPress.org eyenzelwe wena（njengalokho engikuhlanganisile kulo mhlahlandlela）。 Ngaphandle kokunqoba umkhawulo webhulogi lamahhala、ウクフラokungenzeka kwebhulogi lakho akunamkhawulo.
Kepha nansi ukubamba：
Kukhona imithetho ebekwe yipulatifomu ngayinye okudingeka uyilandele
Igama lesizinda sebhulogi yakho libonakala njengesizinda esingaphansi kwe-「myblogname.wordpress.com」noma i-「myblogname.tumblr.com」
Kukhona ukusebenza okulinganiselwe、ama-plugins nokukhethwa kwengqikithi ongayenza kubhulogi yakho
Ngokuvamile、amapulatifomu amahhala akhawulela ithuba lokwenza imali ngebhulogi yakho
Isikrini sithathwe kusuka Inqubomgomo Yokukhangisa ye-WordPressページ。
ウェイクワフナウクカライブロゴヤクホ？ Noma、usuvele unayo ibhulogi ongaqiniseki ukuthi uyithathe kanjani ifike ezingeni elilandelayo? Uma impendulo yakho
Atmodināt wafuna ukuqala ibhulogi yakho? Noma, izmantojiet unayo ibhulogi ongaqiniseki ukuthi uyithathe kanjani ifike
wafuna ukuqala ibhulogi yakho를 깨우셨습니까? Noma, usuvele unayo 이불로 기 온가 키니 세키 ukuthi
Ukubhloga Kwama-чайники: Ungaqala Kanjani I-Blog Ephumelelayo ngo-2020
Разбудить вафуну укукала ибхулоги яхо? Нома, усувеле унайо ибхулоги онгакинисеки укути уйитхат канджани ифике
Pessimus Web Design Erroribus conposuit, în site-ul Malum Exempla X
Skats uz Cloudways: PaaS mazajiem uzņēmumiem
Hoe maak je een moordenaar over pagina
44 veidi, kā kļūt par autoritāti jūsu nišā
Scala Hosting: tenens nova Nível de anúncio de confiabilidade
Cadre și teme de pornire pentru dezvoltatorii WordPress
Wolle jo jo domein fã Nameekap de GoDaddy krije?
Фреймворки и начальные темы для разработчиков WordPress
Por que um blog de golfe pode ser mais lucrativo do que você pensa (e como iniciar um)
Politica WHSR sigură
Су бандхигида HostScore.net – Хабка Кусуб, Ксогта-Даран и Логу Талагал Ин Ло Дверто Мартигалияха Вебсайдх
Kā iegūt 8000 emuāru komentārus: gadījuma izpēte
Интее Аиуу Иахаи Веб локација Ку Деекаа Киимаха 2020?
Biznesowy przewodnik po sponsorowaniu blogów i SEO
Webbhotellintervju: Frågor och svar med CEO för CloudAccess.net Jonathan Gafill
Od Bloggera do niezależnego pisarza
Nchịkọta ọrụ na MySQL database for phpMyAdmin
Ny androm-piainana 52 anos Idea dia manomboka amin’ny blôginao
Ideias: 10 tipos de conteúdo do Facebook para impulsionar o engajamento
Slik bygger du inn et Google-skjema i WordPress
웹 호스트 인터뷰 : Steadfast 설립자 겸 Karl Zimmerman CEO
Otu esi eme ka ebe obibi gi į savo vietą, kur nėra mano
Vartotojo valdymas „MySQL“ duomenų bazėje naudojant „phpMyAdmin“
Ме я са (да кума яя) зува аламар касуванчи Аламар касуванчин ку: абинда ке нуна нава + абубуванда ке амфани да ши дага масу лауйя
30+ Pinakamahusay на Мга Сайт на Наг-аалок и Либренг Larawan нг Larawan в Mga Лараван Para Sa Блог Mga
창의력을 제대로 보충하는 것이 중요한 이유
Tiga Cara Mudah Membuat Website Enviar: Panduan Langkah demi langkah
Cara Memindahkan Blog Anda dari WordPress.com ke Domain yang Dihosting Sendiri
10 pamatnoteikumi efektīvam LinkedIn mārketingam
Kaip susisiekti su el. Pašto dėžutėmis ir el. Paštu, nusiųskite el. Laišką savo verslui
Kickassd: я не знаю, где можно сделать веб-сервис в Интернете
Quid tuはex debemus offerreを凝視し、utセッションは無料のトレーニングをSursum auctoritatiから開始します
Yaa Adeegga Ugu Dambeeya ee Laman web-ka Cusub?
Revisão Scala Hosting
2016 년 블로깅의 7 가지 이점 및 달성 방법
8 No Hapa Whanaketanga Katoa noa me atuou pehea te Whakatikahia
Bästa webbhotell för småföretag (2020)
Erori de gramatică frecvente și cum să le evităm pe blogul tău
Cynghorion Blogger 30 jaar Sut i Dyfu Lezersblog
לערן לצילום לראבן ויסגע. הבלוגים. כתבים של טירינג יחיד
Tjäna pengar på YouTube: Sut mae Tiwtoriaid yn Gwneud Eu Arian
30+ Beste sites die gratis foto’s en afbeeldingen bieden voor blogs
18 geweldige WordPress-thema’s voor sportscholen en fitnesscentra voor 2015
8 Мафија иаван кускурен ВордПресс да кума иадда за гиара су
Beste billige webhotell (under $ 5 / mo)
20 pomysłów na cele niezwiązane z zainteresowaniami na następną kampanię reklamową na Facebooku
Como os blogs colocam você em risco (e como proteger sua privacidade)
WordPress에서 주석을 중지하는 방법
Interviu de web design: întrebări și întrebări cu managerul de parteneriat RocketTheme, Ryan Pierson
Skaitykite „WordPress“ per 30 tse
팁 airson luchd-blogadh SMM : A ‘gabhail do mheadhanan sòisealta chun an ath ìre
Idea Nama Blog: Petua Memilih Nama Yang Sempurna Untuk Blog Anda
Hur dominerar du din bloggenisch med läsarundersökningar
Muuji Tusaalaha Caanka ah ee Webbplats-WordPress
Как начать и запустить успешный образовательный блог
مجموعه آیکون WHSR – vietne 1,200 ، XNUMX + نمادهای اصلی به
25 de tehnici tehnice (și valoarea lor netă) ar trebui să știi
Kan du bruke det bildet? Forstå rettferdig bruk og hvilke bilder som kan og ikke kan brukes lovlig på bloggen din
8 Нада Хапа Вханакетанга Катоа но ме ат пехеа те Вхакатикахиа
Jak skonfigurować automatyczny cotygodniowy biuletyn oparty na RSS na MailChimp